Tirada caruurta sida xun loola dhaqmo oo sii kordheysa. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada caruurta sida xun loola dhaqmo oo sii kordheysa.
La daabacay torsdag 27 oktober 2011 kl 10.02
Cunug la jiidayo timaha
Tirada caruurta sida xun loola dhaqmo ama la garaaco ee ilaa iyo da’da lixda sano ayaa si aad u kordheysa sida ku cad baaritaan uu sammeeyay gole baara dambiyada kaasi oo eegay warbixinada cabashooyinka ee soo gaara booliska, sida uu soo qoray wargeyska maailn laha ee Dagens Nyheter.
Inta u dhaxeysay sanadkii 2005 ilaa iyo 2009 waxaa si aad u kordhay dacwadaha la xiriira caruur si xun loola dhqamo ee gaaray booliska iyo sara kaca dacwadaha ay gaartay 140 boqolkiiba taasi oo micnaheedu yahay 2500 oo dacwad sannadkii.
Sababta ay u korortay dacwadaha caruurta sida xun loola dhaqmo ayaa ah iyada oo shaqaalaha iskuulada oo ay ku jiraan kuwa xanaanada ay inta badan soo gudbiyaan warbixino caruur la garaacay ma si xun loola dhaqmay.
Hase yeeshee waxaa la leeyahay in ay iska badan tahay cabashooyinka ku saleysan sheekooyinka ay sheegaan caruurta iyada oo uusan jirin nabaro ama wax yeelo ka muuqata.